कसले गर्ने पुलको हेरचाह ? | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / पाठक पत्र / कसले गर्ने पुलको हेरचाह ?
कसले गर्ने पुलको हेरचाह ?
Posted by: युगबोध in पाठक पत्र December 5, 2016	0 257 Views
सरर् ा, सौ ंडियार ह“ुदै धर्ना जो ड्ने सडकअन्तर्गत बबई नदीमा पक्की पुल बने को छ । तर पुलको वर पर को अवस् था जीर्ण छ । पुलको उत्तर र दक्षिण भागमा सडकको संर क्षणमा कसै ले ध्यान नदिदा गाडीहरु चल्न नसक्ने अवस् था छ । पुलको छे उमा नदीको बगर मा चर ाउन लग्ने वस् तुभाउहरुले खो स्रनुका साथै २०७१ साल साउनमा बबईमा आएको बाढीका कार ण सडक भत्किएको थियो  । तर त्यसपछि उक्त सडकको दीर्घकालीनरुपमा मर्मत नहु“दा पुल संकटमा पर े को छ ।
पुलको दक्षिणतिर को भागमा के ही नभए पनि उत्तर भागमा सडक दिनह“ु भत्किने गर े को छ । सो ही बाटो मा दिनह“ु छ सातवटा गाडी जो खिम मो ले र गुड्दै आएका छन् । सडकको मर्मत नहुने र सो ही अवस् थामा दिनह“ु गाडी गुडिर हने हो भने ठूलै दुर्घटना हुने अवस् था नआउला भन्न सकिन्न । सडक पूर ै भत्किएर गाडी नै हि“ड्न नसक्ने भएपछि के ही वर्ष पहिले धर्ना गाविसहरुको सहयो गमा सडकको मर्मत गरि ए पनि दीर्घकालीन रुपमा सडकको मर्मत नहु“दा समस् या बढ्दै गएको छ ।
बबईले वर्षे नि पुल वर पर को जमिन कटान गर्दै आएको छ । बबईको कटानस“गै पुलको संर क्षणको लागि तार जाली गर्नुपर्ने भए पनि हुनसके को छै न । पुलको संर क्षण गर्ने जिम्मा कसको हो , गाविस, जिविस वा सडक डिभिजन कार्यालयको ? सम्बन्धित निकायले बे लै मा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
दे वे न्द्र ओ ली
Previous: इमानदारिता र नैतिकता देखाऊ
Next: जनप्रदर्शनमा सहभागी हुन आग्रह